Iivenkile ze-Apple Maps zibonwa ePortugal, eSpain, eCroatia naseSardinia | Ndisuka mac
Iivenkile ze-Apple Maps zibonwa ePortugal, eSpain, eCroatia naseSardinia
Iimephu ze-Apple ziya zichaneka ngakumbi nangakumbi. Okwangoku asiziboni iindaba ezimnandi ngokunxulumene nokubandakanya inkonzo efana nokuJongwa kwesitalato, kodwa siyafumana iimpawu, idatha enomdla kunye nolwazi olukhulu xa sifuna ukuhamba. I-Apple ine Kwiwebhu ezinikele ekuhambeni kwezithuthi zakho, linoxanduva lokufumana ulwazi oluchanekileyo, olugqithiselwa kwiimephu zethu. Kule veki izenzo ziye zanda. Ngethuba lokuqala, izithuthi ziseCroatia nasePortugal. Kwangelo xesha, isiqithi saseSardinia siyabanjwa ziithagethi zika-Apple.
Ukongeza, kwiiyure zokugqibela, uninzi lwabasebenzisi baxele iifoto zesithuthi seApple kwi IMadrid kunye neBarcelona. Ulwazi oluthe kratya lungcono, kwaye ke, kuya kufaneleka ubuncinci kuzo zonke izixeko ezikhulu ukuba zibe nolwazi kuthutho lukawonkewonke kunye nokugcwala kwabantu, kwisithuba esifutshane sexesha.
Ukuqala ngomhla wamashumi amabini kule nyanga, izithuthi zizakufota Croacia, kwi-Split-Dalmatia nakwi-Šibenik-Knin. Kwiiveki ezimbini kamva, baya kufudukela ePortugal, begubungela ummandla weAlentejo Photshugo.
Kolu luhlu kongezwa iintshukumo ezenziwa yi-Apple ngaphezulu kwama-35 e-US, nakwizixeko eziphambili zaseFrance, i-Ireland, i-Itali, iSlovenia, iSweden kunye ne-United Kingdom.
Into igcinwe yiApple, nangona singekayazi ukuba yintoni. UApple ubhengeze ukuba ayizokwabelana ngedatha yobuqu, enje ngobuso babantu ebabambayo. Oku kuphakamisa ukuba inkampani isebenza kwinto engaphezulu kokumelwa komzobo wendawo.
Kwelinye icala, abanye abasebenzisi bakholelwa ukuba iApple iqhuba iprojekthi exubileyo. Oko kukuthi, kwangaxeshanye kuthatha imifanekiso, ezi kufuneka zisetyenziselwe ukuqhuba okuzimeleyo kwesithuthi seApple esizayo. Le nyani ayiqinisekiswanga yinkampani, kodwa yonke into ethetha ukubona intshukumo izisa itekhnoloji entsha yenkampani engayi kusishiya singakhathali.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » Iivenkile ze-Apple Maps zibonwa ePortugal, eSpain, eCroatia naseSardinia
I-Apple yandisa inkqubo yokulungisa simahla kwi-MacBook Pros ka-2013-2015
I-Apple ikhupha ii-betas ezintsha zeewatchOS 4.2 kunye ne-tvOS 11.2